ဆူဒန်နိုင်ငံတွင် တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဆန္ဒပြသူများကို သေနတ်ပစ်ခတ် ရှင်းလင်း၊ ကိုးဦးဒဏ်ရာရ - Yangon Media Group
ဆူဒန်နိုင်ငံတွင် တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဆန္ဒပြသူများကို သေနတ်ပစ်ခတ် ရှင်းလင်း၊ ကိုးဦးဒဏ်ရာရ
ခါတွန်၊ မေ ၁၆
ဆူဒန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ခါတွန်မြို့အလယ်ပိုင်းတွင် ဆန္ဒပြသူများကိုရှင်းလင်းရန် လက်နက်အစစ်များကို အသုံးပြုပစ်ခတ်ခဲ့ ကြောင်း ဆန္ဒပြအဖွဲ့က ပြောဆိုခဲ့ပြီး ဒီမိုကရေစီဆီသို့ ဦးတည်စေမည့် အဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့စည်းရေးအတွက် ဆွေးနွေးမှုများကို ၇၂ နာရီ ကြာ ရပ်ဆိုင်းထားကြောင်း သိရသည်။
မေ ၁၅ ရက်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဆန္ဒပြပွဲအတွင်း အနည်းဆုံး လူကိုးဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ယင်းဆူပူအကြမ်းဖက်မှု များသည် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ သုံးနှစ်ကြာမြင့်မည့် အ ပြောင်းအလဲကာလတစ်ခုအတွက် နိုင်ငံကို ထိန်းကျောင်းမည့် စစ် တပ်၊ အရပ်ဘက်ပူးတွဲအဖွဲ့တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ သဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိရန် လမ်းကြောင်းအတွက် ဆွေးနွေးမှု များကို စတင်စေခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ယင်းအကြမ်းဖက်မှုအတွက် တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆန္ဒပြသူများနှင့် အစိုးရဘက်ကလည်း အပြန်အလှန် စွပ်စွဲပြောဆို ထားကြသည်။ ဆူဒန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်း၏ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် အာဂျတ်ဖာရစ်က ”ကျွန်တော်တို့ဟာ အရပ်သားတွေကို တိုက်ခိုက် တဲ့အတွက် တာဝန်ယူဖို့ စစ်တပ်ကောင်စီကို ပြောကြားလိုက်ပါ တယ်”ဟုဆိုသည်။ ¤င်းတို့အသင်းသည် လွန်ခဲ့သောလတွင် သမ္မတ အိုမာအယ်ဘတ်ရှာကို စစ်တပ်က ဖယ်ရှားမှုကိုဖြစ်စေသည့် လနှင့် ချီသော ဆန္ဒပြမှုများကို ဦးဆောင်ခဲ့သူများ ဖြစ်သည်။
¤င်းက ”သူတို့ဟာ သူပုန်တွေကို ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ အရင်အစိုး ရလိုပဲ အလားတူ နည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်”ဟု ရိုက် တာသတင်းဌာနကို ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော် ဆူဒန်နိုင်ငံ၏ အကူးအပြောင်း စစ်တပ်ကောင်စီအကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအက် ဒယ်ဖာတာအယ်ဘာဟန်က ဆွေးနွေးမှုများ လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် တင်းမာမှုလျှော့ချရေး အစီအစဉ် နားလည်မှုကို ဆန္ဒပြသူများက ချိုးဖောက်ခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲခဲ့ပြီး ဆန္ဒပြသူများသည် စစ်တပ်နှင့် သဘောတူထားသည့် ဆန္ဒပြရမည့်ဇုန်အပြင်ဘက်ရှိလမ်းများကို ပိတ်ထားပြီး မြို့တော်မှ လူသူအများကို ထိခိုက်စေခဲ့သည်ဟု ပြော ကြားခဲ့သည်။
မေ ၁၆ ရက်တွင် ရုပ်သံမှထုတ်လွှင့်ခဲ့သည့် မိန့်ခွန်း၌ ဗိုလ် ချုပ်ကြီး ဘာဟန်က နားလည်မှုကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည့် ဆန္ဒပြခေါင်း ဆောင်များ၏နာမည်ကို ထုတ်ပြောခဲ့ပြီး သဘောတူညီချက်တစ်ခု ကို အပြည့်အဝမဖန်တီးနိုင်မီအထိ ၇၂ နာရီကြာဆွေးနွေးမှုများကို ရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
(၁၄) ကြိမ်မြောက် သုတစွယ်စုံ စာပေဆုအတွက် ဆုရရှိသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်
မိတ္ထီလာ ရဲစခန်းဝင်းတွင် ရဲအုပ်နှင့် ဇနီးဖြစ်သူ သေနတ်ဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံး
တောင်ကိုရီးယားနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ပူးတွဲ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မည့် နေ့ရက်ကို ထုတ်ပြန်ကြေည?
ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်များ ပါဝင်ထားသည့် ‘တိုးကျော်မန်းနဲ့ နန်းဆန်တဲ့ရွာ’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ရံ??
ဖီဖာကလပ်ကမ္ဘာ့ဖလားနဲ့အတူ ၂ဝ၁၇ မှာ ဆုဖလား ငါးလုံး သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်